people Nepal » प्रणय दिवसमा ‘रोज गार्डेन पार्क’ शिलान्यास प्रणय दिवसमा ‘रोज गार्डेन पार्क’ शिलान्यास – people Nepal
प्रणय दिवसमा ‘रोज गार्डेन पार्क’ शिलान्यास
Posted on February 14, 2018 by Sudip Panta
फाल्गुन २, दमक । प्रणय दिवसको अवसर पारेर दमक नगरपालिकाले ‘रोज गार्डेन पार्क’ शिलान्यास गरेको छ । वडा नं. ७ स्थित करीब ८ कट्ठा जमिनमा नगरपालिकाले खुल्ला क्षेत्रअन्तर्गत पार्क बनाउन लागेको हो ।नगरपालिकाभित्र खुल्ला पार्कको अभाव छ । युवा जोडी, वृद्धवृद्धा तथा बिहानीपख मर्निङ वक गर्नेहरुलाई मध्यनजर गर्दै पार्क निर्माण गर्न लागेको मेयर रोमनाथ ओलीले बताए । पार्कको बुधबार बिहान मेयर ओली र उपमेयर गीता अधिकारीले संयुक्त रुपमा दुईवटा गुलाबको फूल रोपर शिलान्यास गरे । पार्क निर्माणमा नगरपालिकाले ४० लाख बढी लगानी गर्ने प्रशासकीय अधिकृत युवराज दाहालले बताए । उनका अनुसार एक बर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरि तत्कालै निर्माण कार्य थालिनेछ ।
पार्कको डिजाइन तयार भइसकेको छ । व्यवस्थित पार्किङसहितको पार्कभित्र फरक फरक रंगमा फूल्ने १५ किसिमका गुलाबका फूल रोपिनेछन् । अधिकृत दाहालका अनुसार पार्कभित्र ७ सय ३७ स्क्वायर फिटमा गुलाबका फूल रोपिनेछ । रोज गार्डेन भनिएकोले कुल एरियाको २५.७ प्रतिशत क्षेत्रमा गुलाबका फूला मात्र रोपिनेछन् । पार्कभित्र व्यवस्थित लोटस गार्डेन, योगा पार्क, जगिङ पार्क समेत रहने अधिकृत दाहालले बताए । ‘युवा जोडीलाई समय बिताउन तथा रमाइलो गर्न अब टाढा जानु पर्दैन’ अधिकृत दाहालले भने,‘यो पार्क विशेष गरि उनीहरुकै लागि बनाउन लागेका हौं ।’
दमक चोक नजिकै बनाउन लागिएकोले पार्कले बाह्य पर्यटक भित्र्याउन पनि सहयोग गर्ने दाहालले बताए । पार्क बनेपछि सडकमा मर्निङ वक गर्दा दुर्घटनाको जोखिम न्यूनिकरण हुने मेयर ओलीले बताए । उनले बढ्दो घनत्व र शहरको सुन्दरतालाई बचाई राख्न पनि पार्क निर्माण थाल्नु परेको बताए ।उपमेयर अधिकारीले पार्क निर्माण सम्पन्न भएपछि नगरको गरिमा र चर्चा थप बढेर जानेमा आफू आशावादी रहेको बताइन । पार्क निर्माण गर्न लागिएको स्थानमा तत्कालीन पञ्चायत सरकारले रजत जयन्ती मनाएको स्मारक रहेको छ । उक्त स्मारकलाई नभत्काई संरक्षण गरेर रोज पार्क निर्माण गरिने दाहालले बताए ।
होस गर्नुस १५ वर्ष जेल परियला ? के गर्न पाइँदैन सामाजिक सञ्जालमा ?